अक्टोबर 16, 2013 बिहान 8:58 बजे
सबैभन्दा पहिले मेरो इन्फोग्राफिक साझा गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद, म खुशी छु कि तपाईंले यो उपयोगी पाउनुभयो!
दोस्रो, मैले भर्खर यसलाई अलि बढी आकर्षक बनाउन अपडेट गरें। धेरै असुविधाजनक भएकोमा माफ गर्नुहोस् 😉 तपाईंले मेरो ब्लगमा संस्करण2फेला पार्नुहुनेछ (तपाईंले आफ्नो लेखमा प्रयोग गर्नुभएको समान लिङ्क)।
शानदार! अपडेट गरिएको - धेरै धेरै धन्यवाद रोबर्ट।
10 क्लासिक र सोशल मिडिया मार्केटिङ बीच भिन्नता - यो वास्तवमै राम्रो लेख हो। हामी कहिलेकाहीँ क्लासिक र सोशल मिडिया मार्केटिंग बीचको भिन्नताहरू खोज्छौं, र यहाँ मैले जवाफ पाएँ। धन्यवाद
धेरै उपयोगी इन्फोग्राफिक... (ofc सन्दर्भमा) मेरो व्याख्यानको लागि प्रयोग गर्दैछु। धेरै धेरै धन्यवाद!
क्लासिक मार्केटिङ र डिजिटल मार्केटिङ बारे धेरै रोचक तुलना। इन्टरनेटको साथ, हामी कम बजेट प्रयोग गर्न सक्छौं र समान परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्छौं। बाडेको मा धन्यवाद।